Mila fijery sy fihetsika vaovao ny tanindrazana… | NewsMada
Mila fijery sy fihetsika vaovao ny tanindrazana…
Fahatsiarovana ny tanindrazana izao fankalazana ny 26 jona izao, fanehoana fitiavana izany. Tompon’ny mahazaka manana ny tena? Manana sy mizaka ny hoe Fahaleovantena. Misy ve fitiavan-tanindrazana amin’izao? Na tia tanindrazana ny Malagasy. Kibo mitsara tena amin’ny ataony ny tsirairay.
Na izany aza, efa nisy fotoana teto nahavaky vava ny sasany: tapitra tamin’ny “Raharaha 72”, hono, ny fitiavan-tanindrazana. Nahoana? Loza no nafitsoky ny ankamaroan’ny mpilalao politika, mpirangaranga hoe tia tanindrazana: maka ny fon’ny vahoaka hahazoana fahefam-panjakana amin’izany.
Nefa tsy izay loatra no nitranga, nanjary filan-karena ny hoe politika… fitiavan-tanindrazana. Famitahana vahoaka… mihamahantra, na manankarena aza i Madagasikara; ny mpilalao politika, miady an-toerana lava hahazoan-karena. Saika tsy fanta-piaviana ny vola iasan’ny mpilalao politika sasany?
Tsy vitan’izay, anisan’ny fositra nampahantra ny vahoaka koa ny fiheverana ny mpitondra ho raiamandreny? Mandeha ho azy amin’izany ny fitondrana ny vahoaka ho toy ny zaza mandrakariva: lazaina ho hendry rehefa mangina, tsy mikofoka… Nitondra inona eo amin’ny fampandrosoana izany?
Manampy trotraka, raha ny fijeriny sasany: mahatsiaro ho tsy tompon’ny taniny na mahazaka manana izany ny ankamaroan’ny Malagasy. An’ny razana ny hoe tanindrazana? Na efa matiy ny tena vao tompony. Be fadifady, saro-kitihina, lovaina sy ampitaina amin’ny taranaka ihany dia izay… ?
Anisan’ny mahasarotra sy mahamafy ary mahaela ny hoe fampandrosoana izany rehetra izany? Amin’izao faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantena izao: misy fomba fijery sy fihetsika mila miova sy ovaina amin’izay, raha tena hanao fampandrosoana? Mila fahasahiana sy fijoroana izany?
Ny maty ho an’ny tany, ohatra, fa tsy ny tany ho an’ny maty? An’ny velona sy hanasoavana azy amin’izay ny tany, fa tsy arovana sy ambenana fotsiny. Hisy amin’izay fiovana sy fanovana amin’izany? Fijery vaovao, fisaina vaovao, fihetsika vaovao… ho amin’ny tena fampandrosoana.